Oromoon Galaana; irra Dhangalaana! Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo - Independent Oromia
Warraaqsa Galaana Uummataa 2020
Oromoon Galaana, irra Dhangalaana!
Wareegama lubbuu, dhiigaa, dafqaa fi lafee ilmaan Oromoodhaan TPLF impayera Itiyophiaa hafan keessaa salphattee baatee Tigrayitti galte. Yeroo Tigreen Tigrayitti galte sanatti fooliin bilisummaa Oromiyaa keessatti urgaahuu eegalee ture. Fooliin bilisummaa kun ilmaan Nafxanyoota maraachee bilisummaa Oromoo dura isaan dhaabe. Ilmaan Nafxanyootaas Abiy Ahimed qabatanii eenyummaa Oromoo dhabamsiisuun Habashoomsuu ykn ajjeesuu fi Oromiyaa diiguun karoora isaanii godhatan.
Kanas hojiitti hiikuuf ilmaan Oromoo Habashoomuu didan doorsisuu, hidhuu, gidirsuu irra darbees addunyaa kana irraa dhabamsiisuuf loltuu, polisii fi milishaan itti bobbaasnii haxaawuu itti fufan. Qeerroo Oromoo bakkayyuu qalaa Oromoo shororkeessanii qabsoo isaa irraa ugguruuf dhama’an. Oromoo summii fi xiyyaaraan lolan, dhukkuba daddarbaafis saaxilanii gaga’an. Qee’ee fi oyruun Oromoo balleessuun Oromoo beelaa fi dhumaatiif qopheessaa jiru. Har’a dhimmi Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhimma jiraachuu fi dhabamuu ta’ee jira!
Gatiin wareegama jaallanii, kabajaan lubbuu kuma kudhanii kana ta’uu hin malle! Wareegama kaleessaa fi har’a bahaa jiruu callisanii ilaaluun du’a, gidiraa, hiyyummaa fi hidhaa nurraa dhaabuu hin dandeenye. Rakkoo keenya isa maayyii xumura itti tolchuuf warraaqsi walii galaa barbaachisaa ta’eera. Warraaqsi marsaa kanaa Warraaqsa Galaana Uummataa(WGU) jedhama. Dhaadannoon warraaqsichaas ‘Oromoon Galaana, Irra Dhangalaana!’ ken jedhu ta’a. Warraaqsi kun haga akka galaanaa guutee Oromoon bahaadhihaa, kaabaa-kibbaa fi gidduu galeessi wal argee fi waliif galee mirga hiree mataa isaa ofiin murteeffatutti hin dhaabbatu!
Read also: Hiree Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa
Gaaffii fi akeeki ilmaan Oromoo irratti wareegaman bakkaan gahuu malee of-duuba mil’achuun hin jiraatu! Wareegama Oromoon guyyuu baasaa jiru kanatti gatii itti tolchuuf Oromoon bakkayyuu tokkummaan yeroo tokkotti akka galaanaa ilmaan Nafxanyootaa fi gufuuwwan bilisummaa irra dhangala’ee biyya isaa dhuunfachuun dirqii dha! Du’a maqaa hin qabne kan karoora diinaan du’an irra wareegama seenaa qabu kan falammii haqaa fi bilisummaaf godhamu keessatti aarsaa baasuun hiraarfamaa, gadadoo fi du’a Oromootti xumura argachuu kabajaa qaba! Filmaatni Oromoo Bilisummaa ykn Du’a!
Tarkaanfiilee ammaaf Oromoon fudhachuu qabu keessaa gariin:
Karaa cufuu, sarara ibsaa fi riqicha adda kutuu;
Qabeenya diinaa dhuunfachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu, kan dhuunfachuun hin dandeenye ibidda itti kaahuu;
Qabeenyaa fi waajiraalee bulchiinsaa, polisaa fi bilxiginnaa dhuunfachuun qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuu ykn barbadeessuu;
Miseensota bilxiginna kanneen uummatatti loltuu waamanii ykn bobbaasanii ficcisiisan irratti tarkaanfii fudhachuu;
Ittiin ooduu, gaddaa fi gammachuu isaanii irratti argamuu diduu,
Keessaa warra hamoo filatanii tarkaanfii keessa deebbii hin qabne irratti fudhachuu ta’a.
Oromoon galaana! Diinni galaana kana gogsuuf dhama’us itti hin milkaahu! Galaanni kun guutee gufuu fi kosii Oromiyaa keessaa ni qulqulleessa! Oromoofis furmaata maayyii fida! Hidhaan, gidiraa fi duutis Oromoo irraa dhaabbata! Gaafa galaanni kun guute, Oromoo, Oromummaa fi Oromiyaan bara baraan jiraatu! Ekeraan jaallan wareegamaniis ni boqota! Hawwii fi fedhiin ilmaan Oromoo ni guutama; bara baraanis jiraata!
Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni walaboomti!
Hub. Dhaamsi warraaqsaa kana fi kan wal duraa duubaan dhaamamu wal hordofuu, wal dhaqabsiisuu fi hojiitti hikuun mirgaa fi dirqama Oromummaati!
RSWO webcast radio